Semalt: Izizathu Eziyisiseko zokuba i-Hacker ihlasele le Nwebhusayithi
Nguwuphi umthandazo wonk 'umntu ophethe iwebhusayithi ukuba angangeni ezandleni ze-cyberizigebengu ezifana nabahlaseli. I-intanethi yehlabathi lonke izele abantu abaninzi abanikekileyo ngokusemthethweni.Yonke ishishini le-intanethi lilonke malunga ne-SEO nendlela yokuphumelela kwi-intanethi. Ukhuseleko lwewebhusayithi aluyikukhathazeka ngokuyinqobo xa wenza iiwebhsayithi.Abantu badla ngokuzama ukwakha amasayithi kunye nomsebenzisi wokugqibela okanye injongo yokuphela kwewebhusayithi engqondweni. Into abangaziyo kukuba abahlaseli bachithaubusuku bokulala bezama ukuhlakulela ukusetyenziswa kunye neendlela, ezinokunyusa imisebenzi yazo. Ezinye zezihlaselo zokuhlaselwa, abaduni abasebenzisa kuzolonke ixesha lokukhangela ixhomekeke kwizixhobo ezitsha nezizayo, ezenza ingozi yoshishino lonke.
Ukuhlala kude nabagculi, unokufuna ukuqala okokuba kutheni abo bahlaselikwiwebhusayithi. Nalu uluhlu olwenziwa nguMax Bell, Semalt Umphathi weNtuthuko yomThengi, owenza ukukhanya okutsha kwizizathu ezihlaselwa yi-hacker eyodwa:
1. SEO ugaxekile.
Ukhuphiswano olungenanto olufanelekileyo kwintsimi ye-e-yorhwebo luyazi kakuhle, ngakumbi xa badlalaindima. Aba bantu banako ukuba uluhlu lwe-imeyile kwiwebhusayithi yokhuphiswano kunye nokuyisebenzisa ukuthatha abathengi. KwezinyeKwiimeko, banokudiliza isayithi efana ne-DDoS hacks, apho iinjongo ezinkulu zihlaselwa ngumncedisi ngezigidi zezicelo ngexesha. Eziabagculi banokufuna i-pay pay to remove their exploits kubangele ukulahleka okukhulu.
2. Ukuba iMali.
Ukukhwabanisa kwe-Cyber ​​kufumana i-fuel from hocking.I-intanethi ivela kwiakhawunti yebhanki eneentambo kunye nezinye iinkqubo zokuhlawula ezifana ne-PayPal. Kwezinye iimeko, abahlaseli bangasebenzisa i-SQL Injection ukuba bangene kubantuungene kwaye wenze utshintshelo lwemali ngokungathi bangabalinganiswa bokwenene. Abanye abahlaseli banokuboleka imali-mboleko ngokusebenzisa ulwazi lomntu obiwe.
3. Ukuthintela ulwazi loqhagamshelwano.
Abahlaseli bafumana ulwazi oluninzi lomntu. Abaxhasi be-Cyber ​​bangasebenzisa olu lwaziukwenza isongelo kwixhoba. Abanye abantu bangenza izigwenxa ngokusebenzisa i-akhawunti ezingenayo, kuphela ukudlulisela ingxaki kumntu ongaboniyoumntu. Kwezinye iimeko, ulwazi lomntu siqu njengekhadi lesazisi, i-SSN kunye neelayisenisi yokuqhuba iindawo zokuthengisa kumnatha omnyama. Ububi besazisikunye nezinye izinto zobuqhetseba ezixhomekeke kule akhawunti. Abasebenzisi bafanele baqaphele ezi ntlobo zababhiki.
4. Ukuphazamisa uxolo.
Abanye abagculeli abanakho ukufuna ukuntshontsha ixhoba. Nangona kunjalo,Bayekethisa imeko ye-intanethi yokhuseleko kwaye bangenza iwebhusayithi yakho ifumane i-flag yeGoogle. Eziwebhusayithi zineenkathazo ngokubeka indawo,kwaye yonke inkqubo inokuyenza imizamo yakho ye-SEO iphumelele.
Kukho izizathu ezininzi zokuthi kutheni inkohlakalo izakufumana inzala yokukhangela iwebhusayithi yakho.I-intanethi yonke igcwele izigebengu ze-cyber ezithatha izixhobo ezahlukeneyo zewebhu kunye nokukhuselwa komsebenzisi. Yonke inthanethiabaninzi abantu abaye bahlangana nabasonkcoyi kakhulu. Ngokomzekelo, abagculeli bangabonakalisa ubomi bomntu owaziwayongokusebenzisa imifanekiso ethile, engayibamba kwi-intanethi. Ezinye izizathu zokubangela ukuba abahlaseli badibanise iwebhusayithi yakho kule khokelo. Ungaufunde ezinye zazo kwaye ukhulise ukhuseleko lwewebhusayithi yakho ye-e-commerce ngokuchasene nabahlaseli.